Vidio 7 Should Kwesịrị ducingmịpụta Nwekwuo Nsonaazụ Ahịa | Martech Zone
Satọde, Ọgọstụ 1, 2015 Douglas Karr
Pasent 60 nke ndị ọbịa na saịtị ahụ lee vidiyo mbụ tupu ị gụọ ederede na saịtị gị, ebe ọdịda, ma ọ bụ na ntanetị. Chọrọ ịbawanye njikọ aka na netwọkụ mmekọrịta gị ma ọ bụ ndị ọbịa web? Mepụta ụfọdụ vidiyo dị iche iche iji zube na isoro ndị na-ege gị ntị kerịta. Salesforce etinyela nnukwu infographic a na nkọwapụta na ebe 7 iji tinye vidiyo iji mee ka nsonaazụ ahịa pụta:
Nye a nabata vidiyo na ibe Facebook gị ma bipụta ya na Ihe ngalaba. Nwere ike ịgbakwunye vidiyo a site n'ọbá akwụkwọ nke vidiyo ị bugoro na ibe gị. Hụ na ị gụnyekwara ngalaba gị iji mee ka ndị ọbịa laghachi n'ụlọ gị.
Ke ini ke ini kekọrịta vidiyo na Twitter ebe ị na-atụle isiokwu ma ọ bụ kesaa nkọwa gbasara ụdị, ngwaahịa na ọrụ gị. A na-egosipụta vidio ndị e kesara na Twitter na igbe mgbasa ozi dị na ibe gị.
Pinye vidiyo na Pinterest na mbadamba isiokwu dị mkpa iji nwekwuo echiche na ọwa Youtube gị. Ma n'ezie, ebuli gị Youtube ọwa iji mee ka okporo ụzọ gafere n'okporo ụzọ ntụgharị.
Tinye vidio na profaịlụ gị LinkedIn nke ahụ gosipụtara talent, akara, ngwaahịa na / ma ọ bụ ọrụ gị.
Kwado Channel Chọgharịa Lee na Youtube ma tinye Trailer Channel. Nke a bụ vidio akpọrọ ndị na-edebeghị aha. Gbaa ndị mmadụ ume ịdenye aha na ọwa gị site na vidiyo a.
tinye video àmà gị ọdịda peeji nke ịgbakwunye ezigbo na ntụkwasị obi na oku na-aga-eme n'ime ibe.
tinye a video gị ụlọ ọrụ n'ụlọ peeji nke (ma ọ bụ ọbụna njikọ sitere na ibe ọ bụla) nke na-akọwa ụlọ ọrụ gị na ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ya.
Egbula vidio ndị a! Nkwado m bụ ịdebe vidiyo gị n'etiti 30 sekọnd na nkeji 2 mgbe ị na-eji ha dị ka nke a iji zuo ezu nke akụ dijitalụ ndị ọzọ. Gbaa mbọ hụ na ụda ụda gị dị ọpụrụiche ma vidiyo a na-arapara na isi yana ọkpụkpọ oku na-arụ na njedebe. Debe vidiyo gị nke ezigbo ya na ndị ezigbo ya na ezigbo ọnọdụ - anaghị anabata polish nke azụmahịa telivishọn ma ọ bụ na-enyo enyo na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ mgbe ị na-etinye vidiyo n'ime usoro mmekọrịta mmadụ na ibe.
E nwere ọtụtụ ụzọ iji tinye video n'ime usoro ịre ahịa n'ịntanetị. Cannwere ike ịgbakwunye vidiyo na mgbasa ozi gị, ibe ahịa, ahịa ọdịnaya, ọrụ ndị ahịa, na ndị ọzọ iji nwekwuo ohere ndị na-ege gị ntị ga-eri ozi gị ma mee ihe.
Nke a bụ infographic, 7zọ asaa iji tinye vidiyo na Mgbasa Ozi Mgbasa Gị, si Salesforce Canada.
Tags: n'ụlọ peeji nke videoọdịda videos peejiVidio Ahịandị ahịandị ahịa canadavidiyo nke akaebevidiyo maka facebookvideo maka ebe obibivideo maka ọdịda peeji nkevidiyo maka njikọvidiyo maka pinterestvidiyo maka twittervidiyo maka youtubeahịa vidiyousoro mgbasa ozi vidiyo